I-ANC eNorth West ngeke ivotele ukukhipha uNdunankulu - Duarte | News24
I-ANC eNorth West ngeke ivotele ukukhipha uNdunankulu - Duarte
Hartbeespoort – I-African National Congress (ANC) ithi inethemba lokuthi amalungu ayo esiShayamthetho saseNorth West ngeke aseseke isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNdunankulu Supra Mahumapelo, nakuba ubuholi benhlangano bubhekene nezinkinga.
Imizamo yokuketula uMahumapelo imisiwe kuleli sonto ngemuva kokuba i-Economic Freedom Fighters (EFF) ibabele enkantolo ukuphikisa isinqumo sikaSomlomo sokungavumi ukuba kuvotwe ngokuyimfihlo.
NgoLwesithathu, i-NWC ye-ANC esifundazweni ibenomhlangano ngenhloso yokudingida ukungaboni ngasolinye kwamalungu esigungu esiphezulu esifundazweni.
OLUNYE UDABA: UMalema usebonene noNgqongqoshe wamaPhoyisa kulandela ukusongelwa ngokubulawa
Iphini likanobhala jikelele we-ANC uJessie Duarte lithi ngaphandle kwelungu lesishayamthetho eligulayo uDuma Ndleleni, obengekho emhlanganweni, wonke amanye amalungu e-ANC eSishayamthetho athe ngeke avotele ukuba akhishwe uMahumapelo.
“Bakubeke kwacaca ukuthi ngeke bavote ngendlela efana neyamaqembu aphikisayo esiShayamthetho.”
Nakuba isiphakamiso se-EFF sizokwesekwa yi-DA basazodinga amavoti angu-8 kwangu-23 e-ANC ukuze isiphakamiso sokukhipha uMahumapelo siphumelele.